Edinson Cavani Oo Liiska Murashaxiinta Ballon d’Or Ka Saaray Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Edinson Cavani Oo Liiska Murashaxiinta Ballon d’Or Ka Saaray Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo
(21-11-2018) Weeraryahanka xulka qaranka Uruguay iyo kooxda PSG ee Edinson Cavani ayaa sheegay in abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or ay sannadkan u qalmaan xiddigihii wacdaraha ka dhigay oo kaliya, waxaanu meesha ka saaray Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey iska kaligood ku loollami jiray.
Cavani oo u warramayay barnaamij ka baxa idaacad lagu magacaabo Radio Montecarlo oo uu soo saaro xiddigii hore ee xulka qaranka France iyo AC Milan ee Christophe Dugarry, ayaa waxa uu kaga hadlay xidhiidhka u dhexeeya isaga iyo labada weeraryahan ee kale ee PSG ee Neymar iyo Kylian Mbappe, qaabka ay u wada shaqeeyaan iyo sida ay muhiim ugu yihiin kooxda.
“Waxaanu haysanaa saddex ciyaartoy oo tayadoodu naga dhigtay koox muhiim ah, waana iska caadi in dhamaantayo aanu doonayno inaanu dhalino goolal, tababaraha ayaana noo dejiya sida aanu u ciyaarayno weerar illaa difaac. Thomas Tuchel in badan ayuu nala hadlaa xilli ka xilli laakiin wax fudud maaha.” Sidaas ayuu yidhi Cavani oo u warramayay Dugarry.
Cavani waxa uu qiray in tababaraha ay ku adag tahay inuu kala xusho ciyaartooyo badan oo xiddigo ah oo kooxda jooga, balse ugu dambaynta ay isfahmi doonaan, waxaanu yidhi: “Uma fududa tababaraha, laakiin waxay ila tahay, in qunyar qunyar shaqada aanu qabano ee maalinlaha ah aanu guul ku keeni doono. Marka aanu isfahamno, waxa aanu gaadhi doonaa guulo badan, sababtuna waa in aanaan sidan (dhibaatada) kusii jiri doonin.”
Jimcihii waxa ciyaar saaxiibtinimo iskaga hor yimid Brazil iyo Uruguay, waxaana 1-0 ay guushu ku raacday xiddigaha Brazil, balse intii ay ciyaartu socotay, waxa la arkayey Neymar iyo Cavani oo garoonka dhexdiisa ku murmaya, waxaana uu Dugarry weydiiyey Cavani sidii ay arrintaasi u dhacday, waxaanu ku jawaabay: “Waxyaabahani way dhacaan kubadda cagta. Waxa aanu nahay saaxiibbo, walaalo. Laakiin waxa aad doonaysaa inaad guul u keento oo u dagaallanto xulka qarankaaga. Anigu waxba maan samayn, mana taabanin isaga. Waxa aan ugu tegay inaan la hadlo, waxaanan u sheegay in aanan taabanin, intaas ayay ahayd.”
Ugu dambayn, Edinson Cavani waxa sheegay in ciyaartoyga u qalma abaal-marinta Ballon d’Or uu yahay difaacyahanka xulka qaranka France iyo Real Madrid ee Raphael Varane, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in Raphael Varane ka sarreeyo Griezmann, Mbappe…
“Aniga ahaan, waa inuu ciyaartoy Faransiis ah ku guuleysto, waayo waxa jooga ciyaartooyo ay tahay in la siiyo; waxay ku guuleysteen waxyaabo waaweyn. Waa in saddexda midkood uu noqdo. Luka Modric? wuxuu qaatay xili ciyaareed wanaagsan, laakiin Varane ayaa ku guuleystay Champions League iyo Koob Adduun. Modric wuxuu tegay finalka, xili ciyaareed wanaagsana wuu qaatay laakiin Varane ayaa u qalma.”